China echebe, yinye feeder rụpụta na Factory | Akụrụngwa Chengxin
The eriri feeder nwere mfe Ọdịdị na mụ ọrụ, karịsịa nnukwu nri olu na-họọrọ site ọrụ. Anyị isi oru itunanya bụ njiko breaker ngwaọrụ, nke nwere ike n'ụzọ dị irè inyeaka nrụgide na biini ọnụ ma gbochie shed ihe onwunwe ke biini ọnụ.
The eriri feeder nwere mfe Ọdịdị na mụ ọrụ, karịsịa nnukwu nri olu na-mfọn ọrụ. Anyị isi oru itunanya bụ njiko breaker ngwaọrụ, nke nwere ike n'ụzọ dị irè inyeaka nrụgide na biini ọnụ ma gbochie shed ihe onwunwe ke biini ọnụ. A na-eme ka eriri uwe mwụda 6 + 1 dị n'otu oge, yana akwa 6 nke yarịl yarn na akwa 1 nke ezigbo ọla edo a kpara nke ọma si Japan. O nwere nguzogide siri ike, nguzogide esemokwu, combustion na-akwado, na mpụga uwe mpụta abụghị naanị ihe dị mma Ọ nwere ike igbochi ntụ ntụ dị mma ịpụ apụ na iru mmiri dị na ngwongwo ahụ. Ọtụtụ puku tọn ihe kwa awa, na-egbo mkpa nke mmepụta ọgbara ọhụrụ, mepụta nnukwu uru akụ na ụba maka ndị ahịa.
Onye na-ahụ maka eriri igwe na-agbaso ụkpụrụ nke ntụgharị ụwa, ntinye na oghere ndị ahụ dị n'otu axis, ma nwee njirimara pụrụ iche nke njikọ kpọmkwem na moto ahụ, yabụ na ọ nwere usoro kọmpat, ọdịdị mara mma na nke ọhụụ, obere olu na ibu ọkụ. Ejiri ígwè na-ebu nzukọ gia. Ọ nwere ezigbo arụmọrụ na akwa mkpuchi na-eguzogide. Iburu, igbe gia, pụọ na ahụ valvụ ahụ, zere mmetụta nke okpomọkụ dị elu na uzuzu. Ihe mkpuchi ihu na azụ nwere arụmọrụ arụmọrụ dị mma, gbochie nsị ájá, ma gbatịkwuo ndụ ọrụ nke akụkụ na usoro mmanu.
Sayensị Gburugburu Ebe Obibi
Nri ọnụego t / h
Nri ọnụego mgbanwe mode
Manual stepless nnyefe
Agbanwe ugboro stepless ọsọ mgbanwe
Dị ihe mgbawa
Nke gara aga: OEM Manufacturer Warehouse Wall Rapper - CGS ọdịiche na-agbanwe ihu igwe - Chengxin
Osote: CypB ọnụ ọgụgụ diski feeder